राजपामा निर्जलाको चर्चा
राष्ट्रिय जनता पार्टीले राष्ट्रिय सभामा दुई पद हात पार्ने गरी सत्ताधारी नेकपासँग गरेको सहमतियता केही दिन अघिदेखि सांसद निर्जला राउतको चर्चा चल्न थालेको छ । नेकपाले सभामुखमा निर्णय गर्न नसक्दा मात्रै उपसभामुखमा सांसद राउतको नाममा हुने सहमतिको घोषणा हुन नसकेको पार्टी निकट नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रदेश–३ को नाम र राजधानी आज
प्रदेश नं. ३ को राजधानी र नामकरणका सम्बन्धमा शनिबार प्रदेशसभाको सचिवालयमा दुईवटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । शनिबार नै यसबारे बैठकमा छलफल सुरु भएको छ । हेटौँडालाई प्रदेश नं ३ को राजधानी बनाइनुपर्छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा नेकपा संसदीय दलका नेता तथा ३ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि छन् । उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नेहरूमा प्रतिपक्ष दलका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ, राप्रपाका रीता माझी र राप्रपा संयुक्तका रीना गुरुङ छन् ।
सभापतिसँग पार्टी सञ्चालनको योजनै छैन : महामन्त्री कोइराला
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवामा पार्टी सञ्चालनको योजना नहुँदा समस्या आएको बताएका छन् । शबिार पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुने दाबी गरे । उनले भने, “म चार वर्षसम्म चुप लागेर बसेको हुँ । पार्टी सञ्चालनका लागि कुनै नयाँ योजना आउँछन् कि भनेर तर आएन । अबको महाधिवेशनले अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन गर्छ ।”
सहमति नजुटेपछि हेटौंडाको पक्षमा ह्विप जारी गर्ने तयारी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले प्रदेश ३ को नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्न दिएको निर्देशन प्रदेश संसदीय दलभित्र सहजै सहमति नभएपछि सांसदहरूलाई ह्विप जारी गर्ने तयारी भएको छ । केन्द्रको निर्णय अनुमोदन गर्न गत पुस १८ गतेयता चार पटकसम्म प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसे पनि निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि नेकपा सांसदहरूलाई केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्न ह्विप जारी गर्ने तयारी गरिएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।
सूचना प्रविधि विधेयक सच्याऊ : मिडिया सोसाइटी
सरकारले अघि सारेको सूचना प्रविधि विधेयकसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले चासो व्यक्त गरेको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक भएको ठहर मिडिया सोसाइटीले गरेको छ । “सूचना र प्रविधिको विकासले सामाजिक चेतना, जागरण र राजनीतिक परिवर्तनका लागि समेत अभूतपूर्व सहयोग पु¥याएको ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
सिमा फिर्ता गरी छाड्छौंः मन्त्री पोखरेल
नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेपालको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा मिचिएको सिमा फिर्ता गरी छाड्ने बताएकाछन्। प्रेस संगठन कास्कीले विहिबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै मन्त्री पोखरेलले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा मिचिएको नेपालको सिमा फिर्ता गरी छाड्ने बताएका हुन्। नेपालका राष्ट्रिय सवै राजनीतिक शक्तिहरु एकै ठाउँमा भएकोले र ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा नेपाल सरकारको तर्फबाट दाबी स्वरुप डिप्लोमेटिक ढंगबाट कुरा गर्ने भएकोले नेपालको सिमा बिबादलाई छिट्टै हल गर्ने पक्षमा सरकार रहेको मन्त्री पोखरेलले जनाए ।
एकताको लागि सहमतिको विकल्प छैन : देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकता कायम राख्न र पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि सहमतिको विकल्प नभएको बताएका छन् । आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा बिहीबार जिल्ला सभापतिहरुको छलफलमा उनले पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षसँग तत्काल संवाद थाल्ने र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने बताए ।
आर्थिक समृद्धिका लागि घिमिरेको उम्मेदवारी
राष्ट्रियसभाका लागि प्रदेश–१ का उम्मेद्वार राजेन्द्र घिमिरेले जनप्रतिनिधि सार्वजनिक व्यक्ति भएकाले विवेक पु-याएर मतदान गर्न आग्रह गरे । प्रदेश –१का लागि खुल्लातर्फका उम्मेद्वार घिमिरेले बिर्तामोडस्थित होटल हेवनमा पत्रकार भेटघाटमा देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्न र आर्थिक-सामाजिक समृद्धिका लागि सहअस्तित्व र सहकार्य अत्यावश्यक रहेकाले विवेक पु-याएर सक्षम व्यक्तिलाई मतदान गर्न आहवान गरेका हुन् ।
प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सांसद विभाजित
प्रदेश नम्बर ३ को बुधबारको प्रदेशसभाबाट स्थायी राजधानीको विषयले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको छ । स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले डेढ वर्षअघि नै प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि बुधबारबाट छलफल सुरु भएको हो । सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा गठित सम्भाव्यता अध्ययन समितिले २०७५ असार २६ गते नै प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेश गरिएता पनि सो प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन सकेको थिएन ।
नामाकरणसम्बन्धी कार्यविधि पारित
प्रदेश नम्बर ३ को हिउँदे अधिवेशन सोमबारबाट सुरु भएको छ । अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रक्रिया थालनी भएको छ । स्थायी राजधानीकै विषयमा सहमति नजुट्दा विगत चार महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन । सोमबारको बैठकमा प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धी कार्यविधि पारित भएको छ ।
‘परीक्षाबाट वञ्चित गरिए सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्छौं’
अदालतको आदेशले आफू अध्ययनरत कलेज नै खारेजीमा परेपछि ३० जना नर्सिङका विद्यार्थीहरुले आत्मदाहको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले आफूहरुको भविष्य अन्धकारमा पारिएको भन्दै सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित विद्यार्थी संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गर्दै आत्मदाह सम्म गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । “हामीमाथि अन्याय हुँदा पनि सुनुवाई हुँदैन भने आत्मदाह गर्न बाध्य हुनेछौं,” पीडित विद्यार्थी संघर्ष समितिकी संयोजक अनुष्का चौलागाईंले भनिन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन माघ ६ बाट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन माघ ६ गतेदेखि आह्वान गर्ने भएको छ । प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ ६ गते सोमबार दिउँसो २ बजे आव्हान गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन आव्हान गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका प्रमुख स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पृथ्वीजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस यही पुस २६ देखि २८ गते तीन दिनसम्म उत्सवका रूपमा मनाउने भएको छ । पार्टीले देशभरका सबै जिल्ला कार्यसमितिले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदान एवं नेपालको एकीकरणको अभियानप्रति श्रद्धा, सम्मानलगायत अन्य विविध कार्यक्रम आयोजना गर्न निर्देशन दिएको छ । यही पुस २७ गते पार्टीले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा शुभकामना तथा चियापान आयोजना गर्नेछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको १८ पदका लागि आगामी माघ ९ गते हुने निर्वाचनमा ४५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उक्त निर्वाचनका लागि मुलुकका सातै प्रदेशमा आइतबार भएको उम्मेदवारी मनोनयपत्र दर्ता शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।